I-Fort La Latte
Itshe lesikhumbuzo eliyimfihlo
I-Bay of St Malo / Emerald Coast
Unesibopho sokushicilelwa: Guénolé Joüon Des Longrais
I-Siret: Inombolo. 849249461 00021
Ikheli : I-Chateau de la Roche Goyon 22240 PLEVENON-CAP FREHEL
Ucingo : 02 96 41 57 11
Instagram: Fortla Latte
I-imeyili : Fortlalatteoff@gmail.com
Ukubhuka kweqembu: fortlalatte.reservations@gmail.com
i I-Château de La Roche Goyon / Fort Latte inelungelo lokushintsha le migomo noma kunini. Ngakho-ke uyelulekwa ukuthi uthintane njalo nenguqulo yakamuva esebenzayo.
Ngokuqukethwe kwalesi sizindalwazi kushiwo isakhiwo esijwayelekile, imibhalo, izithombe, noma ngabe ziyagqwayiza noma cha, kanye nemisindo isayithi eyakhiwe ngayo. Noma ikuphi ukumelwa okuphelele noma okuyingxenye kwalesi sizindalwazi nokuqukethwe kwayo, nganoma iyiphi indlela, ngaphandle kokugunyazwa okubhaliwe kwangaphambilini kwe- Château de La Roche Goyon / Fort La Latte , akuvunyelwe futhi kuhlanganisa ukwephulwa komthetho okujeziswa yi-athikili L. 335-2 et seq. yeKhodi Yempahla Yobuhlakani.
Ngeqiniso nje lokuxhuma kusayithi, umsebenzisi uyavuma ukuthi uyakwamukela I-Château de La Roche Goyon / Fort La Latte , ilayisense yokusebenzisa Okuqukethwe Kwesayithi ikhawulelwe ngokuqinile kule mibandela elandelayo eyisibopho:
• Le layisensi, enikezwa ngokungakhethi, ayinakudluliselwa komunye umuntu.
• Ilungelo lokusebenzisa elinikezwe umsebenzisi elomuntu siqu futhi liyimfihlo, okusho ukuthi noma yikuphi ukuphinda kukhiqizwe okuqukethwe kwesayithi kunoma iyiphi indlela ukuze kusetshenziswe iqoqo noma umsebenzi wobungcweti, ngisho nangaphakathi enkampanini, akuvunyelwe. Okufanayo kusebenza kunoma yikuphi ukuxhumana kwalokhu okuqukethwe ngezindlela ze-elekthronikhi, noma kusakazwe ku-intranethi noma i-extranet yenkampani.
• Lokhu kusetshenziswa kuhlanganisa kuphela ukugunyazwa kokukhiqiza kabusha ukuze kugcinwe izinjongo zokuboniswa esikrinini somsebenzisi oyedwa kanye nokuphinda kwenziwe ngekhophi eyodwa, ukuze kwenziwe ikhophi eyisipele kanye nekhophi yamaphepha.
• Noma yikuphi okunye ukusetshenziswa kungaphansi kokugunyazwa kwangaphambilini kwe Inqaba yaseLa Roche Goyon / Fort Latte .
Ukwephulwa kwalezi zinhlinzeko kuncike kulowo ophule umthetho kanye nabo bonke abantu ababhekene nezijeziso zobugebengu nezomphakathi ezihlinzekwe ngumthetho wase-France.
Abasebenzisi besayithi I-Château de la Roche Goyon / i-Fort La Latte idingeka ukuthi ihambisane nezinhlinzeko zoMthetho Wokuvikelwa Kwedatha, amafayela kanye nenkululeko, ukwephulwa kwakho okuhambisana nezijeziso zobugebengu. Ikakhulukazi, kufanele bagweme, mayelana nolwazi lomuntu siqu abangafinyelela kulo, kunoma iyiphi iqoqo, kunoma yikuphi ukusetshenziswa kabi, futhi ngokuvamile, kunoma yisiphi isenzo esingase sephule ubumfihlo noma isithunzi sabantu ngabanye. .
Ngokuvumelana ne-athikili 34 yoMthetho othi "Informatique et Libertés" n° 78-17 yangoJanuwari 6, 1978, unelungelo lokufinyelela, ulungise, ulungise futhi ususe idatha ephathelene nawe. Ungakwazi ukuwusebenzisa ngokuthumela incwadi ehhovisi lethu elikhulu.
Izixhumanisi ze-hypertext ezimiswe ngaphakathi kohlaka lwale webhusayithi ngokuqondiswa kwezinye izinsiza ezikhona kunethiwekhi ye-inthanethi, azikwazi ukubandakanya umthwalo wemfanelo we- Château de la Roche Goyon / Fort Latte .
Ukusingathwa kweSayithi kuhlinzekwa yinkampani "wix » .
Inkampani Wix.com Inc.
Ikheli : 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158
Ucingo : +1 415-639-9034.
Isivumelwano sokugcinwa kuyimfihlo
Le webhusayithi ingasebenzisa "amakhukhi". Amakhukhi akuvumela ukuthi usebenzise futhi wenze kube ngokwakho umuzwa wakho kumasayithi ethu. Zisitshela ukuthi yimaphi amakhasi wamawebhusayithi ethu avakashelwa kakhulu, zisisiza ukuthi silinganise ukusebenza kahle kokusesha kwesizindalwazi sethu, futhi zisinikeze ukuqonda ngokuziphatha kwabavakashi, okusisiza ukuthi sithuthukise ukuxhumana kwethu.
Uma ufuna ukukhubaza amakhukhi kusiphequluli sewebhu seSafari, hamba kokuthi Okuncanyelwayo, bese uye kufasitelana Lobumfihlo bese ukhetha ukuvimba amakhukhi. Ku-iPad, i-iPhone noma i-iPod yakho thinta, iya kokuthi Izilungiselelo, bese u-Safari, bese uye esigabeni esithi Amakhukhi. Kwezinye iziphequluli, sicela uthintane nomhlinzeki wakho ngokuthi uwakhubaza kanjani amakhukhi.
Isigaba 1 - Amakhukhi adingekayo ngokuqinile
Lawa makhukhi abalulekile ukuze ukwazi ukuphequlula eyethu amawebhusayithi kanye nokusebenzisa izici zabo.
Isigaba 2 - Ukulandelela amakhukhi
Lawa makhukhi aqoqa ulwazi mayelana nokusebenzisa kwakho kwethu Amawebhusayithi : isibonelo, amakhasi owavakashela kakhulu. Le datha ingasetshenziswa ukuthuthukisa amawebhusayithi ethu futhi yenze kube lula ukuwazulazula. Lawa makhukhi futhi avumela esisebenzisana nabo ukuthi bazi ukuthi uke wafinyelela noma yimaphi ethu amawebhusayithi kusuka kusayithi labo noma ngesikhathi sokusesha ku-net. Lawa makhukhi awaqoqi noma yiluphi ulwazi olukukhombayo. Lonke ulwazi abaluqoqayo luhlanganisiwe ngakho-ke lungaziwa.
Isigaba 3 - Amakhukhi okusebenza
Lawa makhukhi avumela wethu indawo web ukuze ubambe ngekhanda izinqumo ozenzile ngesikhathi sokuvakasha kwakho. Ngokwesibonelo, singagcina indawo okuyo ku-cookie ukuze siqinisekise ukuthi iwebhusayithi yethu yethulwa kuwe ngolimi lwezwe lakini. Singase futhi sigcine izintandokazi ezifana nefonti nosayizi, nezinye izinto ezilungisekayo. Ulwazi abaluqoqayo ngeke lukukhombe wena siqu noma lulandelele umsebenzi wakho wokuphequlula kumawebhusayithi okungewona awe-Apple.
Inqaba kanye nepaki layo kuvulwa njalo ngezimpelasonto phakathi nenyanga kaNdasa.
Kusukela ngo-11 ekuseni kuya ku-5 ntambama.
Inqaba yaseLa Roche Goyon - Fort Latte
Ucingo: +33 (0) 670 813 543
Ngilungiselela ukuvakasha kwami: Chofoza lapha .
Ihhovisi lamathikithi 2022
Abantu abadala: 7,20€
Abafundi (abafika eminyakeni engama-26), abafundi besikole esiphakeme, abafuna umsebenzi (ubufakazi): 6,00€
Izingane (ezingaphansi kweminyaka engu-12): 4.80€
Mahhala izingane ezingaphansi kweminyaka engu-5 ubudala.
Kusukela ngoJulayi 21, I-Sanitary pass, Ukuhlolwa kwe-PCR noma ukuhlolwa kwe-Antigen Kuyimpoqo kwabaneminyaka engaphezu kwengu-12.
Qaphela, ihhovisi lamathikithi kuphela esizeni!
Izilwane zivunyelwe enqabeni kanye nepaki yayo, igcinwe ku-leash.
© 2022 nguMasbath
Izithombe ezikule sayithi azinawo amalungelo. Ngiyabonga Xhumana nathi nganoma yikuphi ukusetshenziswa.